Fandresena maimai-poana! Omeo anay! Omeo anay! | Hevitra MPANOHARIANA
Misaotra fa mazava amiko amin'izay izy itony e !
Efa nahita favori aho izao :)
Nampidirin'i mangamaso @ 00:54, 2009-10-19 [Valio]
Mamangy, Misaotra mampita vaovao, efa ela no tsy nandalo teto. Nanao jery mifanapaka ny vaovao momban'ny baskety aho. Hoy ny tato an-trano manaraka vaovao politika hoe 'voahorakoraka ny PFATY sy Lafarinina'. Hay ve t@ coupe d'Afrique izany e! Toa tadidiko ry Arlette sy ry Josephine be tamin'ny taona 60. Koa iza no nandrombaka ny amboara? Mali?
Nampidirin'i Rolls @ 15:07, 2009-10-19 [Valio]
Lasan'i Senegaly ny amboara e! dia misaotra ary nitsidika teto e!
Nampidirin'i jentilisa @ 15:33, 2009-10-19 [Valio]
Mahafinaritra ny mamaky ity lahatsoratra nataonao . Firaisan-kina sy fiomehezana no betsaka tao. Tsy misy tokoa ny resy rehefa miady am-panajàna hatramin’ny farany.
Nampian’ny koa hoe tong a ny tsy nantsoina, intelo voasioka fa eh eh. Mbola vao santionany marina ka hamafiso ny “sifflet”.
Nampidirin'i Mmm @ 17:50, 2009-10-19 [Valio]
Manjaka ny olon'i OMAR
Ny atao hoe OMAR dia Odon Marie Arsene Razanakolona.
Ny olony dia ireo lasa mpanjaka tampoka, noho ny fananana basy: koma-dahy sarla, Lelyson, Noel RakotoNANDRA, Andre Ndrinajanona, rajoelle, ratsinaORANA, sy ireo olony mpamaky mangazay, mpandoro magro, mpandoro radio sy TVM sy rova, mpanosika olona hotifirina any Ambohitsirohitra, mpamaky FJKM, mpandray tsolotra avy amy karana sy franTAY etc.
FJKM Ambohimalaza. Tao anatin’ny roa alina dia mpitandrina avy ao amin’ny FJKM roa no notafihan’ny jiolahy teto an-drenivohitra sy ny manodidina. Mahalasa ny sain’ny maro izany tranga izany.
Nisy nanafika ny mpitandrina, voavetaveta ny mpanampy azy
Ny alin’ny alahady faha-17 oktobra teo, nisy andian-jiolahy tonga nandroba tao amin’ny tranon’ny mpitandrina FJKM Ambohimalaza Miray. Enina ny isan’izy ireo ka ny efatra nisaron-tava ary ny roa nandeha tamin’izao. Nitondra basy PA miisa roa, sabatra ary antsy maranitra ry zalahy. Lasan’izy ireo tamin’izany ny vola 300.000 Ariary ; nalainy koa ny firavaka volamena hatramin’ny peratra teny amin’ny tanana. Ary rehefa tsy hitan’izy ireo intsony izay halaina dia ilay mpanampy tao an-trano no nanamparany ny habibiany. Araka ny loharanom-baovao dia niharan’ny fametavetana ity zazavavy vao 15 taona ity. Rehefa vitany izany dia lasa nandositra ireto mpangalatra ireto.
Tokony ho tamin’ny 12 ora alina no tonga ireto mpandroba ireto. Ny varavarambe no novakiany nahafahan’izy ireo niditra. Tsy nisy nahahetsika ny tao an-trano ka nanao izay danin’ny kibony ireo jiolahy. Ny loharanom-baovao ihany no ahazoana milaza fa noheverin’ireto jiolahy ireto fa misy volabe ao amin’ilay pasitera. Nisy fety nokarakaraina mantsy tao am-piangonana tamin’io alahady io.
Toa mitady hisesisesy ny fanafihana mpitandrina avy ao amin’ny FJKM amin’izao fotoana izao. Vao tamin’ny sabotsy no nisy jiolahy nandroba tao amin’ny pasitera eny Mandrosoa Ambohijatovo. Ankoatra ny vola dia nalain’ireo jiolahy ihany koa ny solosaina sy ny « synthétiseur » tao am-piangonana. Norahonany koa ilay pasitera fa raha tsy manome vola dia ho alainy an-keriny ny zanany. Teo anatrehan’izany dia tsy maintsy nanaraka izay nolazain’ireo jiolahy izy. Ny ampitso dia io tonga nangalatra teny Ambohimalaza io indray ry zalahy.
Nampidirin'i zafisoro @ 23:20, 2009-10-19 [Valio]
Soa fa nazavainao tokoa ilay lohatenin'ny lahatsoratra fa tena tsy azoko mihitsy. Misaotra fa nahaliana hatramin'ny farany, toy ny mahazatra.
Nampidirin'i Su @ 02:11, 2009-10-20 [Valio]
Mafinaritra be ny mamaky hevitra sahala amin'io ataonao io, satria mahatonga ny olona handinika tsara ny zava-misy
Nampidirin'i rafa @ 09:20, 2009-10-20 [Valio]
nisy tokoa ny sioka sy ny ooo ary difotra tanteraka tao anatin'izany ny tehaka nataon'ireo mpanohana azy
neveriko ho fanatanjahan-tena no tena votoanton'ito lahatsoratra ito kay moa fampidirana ihany satria tena efa "kapoaka" an'ny namana jentilisa mihitsy ity famelabelarana politika ity hanehony ny heviny !
ilay voalazan i nanana Omar no tena mahavalalanina ahy satria ohatran'ny te hiteny izy hoe ny katolika ve izany no mandefa olona hamaky sy handroba ny fjkm sa kosa izaho mihitsy no mivila-maso ka tsy mahita tsara ny sarisariteniny ! izany anefa dia tsy hisy mihitsy fa tena raharahan-jiolahy fotsiny io
Nampidirin'i nytsiry @ 12:06, 2009-10-29 [Valio]